(Waxaa laga soo toosiyay Darwiish)
Reer Darawiish ( Dhulbahante)
البهانتة) عشيرة درویش)
Dhulbante, (Carabi: عشيرة درویش, qabiilka darawiish, Carabi: قبيلة درویش) sidoo kale loo yaqaano Beesha Darawiish ama siciid harti waa qabiil kamida qabaailka Soomaaliyeed ee dega waqooyiga iyo galbeedka Soomaaliya, ee ku caan baxday waa qabiilka ee raacay Sayyidka iyo halganka Dawlada Darawiish. Dhulbahante waxaa kaloo loo yaqaan Reer Daraawiish, waxayna kasoo jeedaan beel waynta Daarood. Deegaanada oo reer darawiish u gaar ah oo in kabadan 40 kun ee dad ku nool, waxaa ka mid ah hareeraha Fiqifuliye, Las Anod, Buuhoodle iyo Marqaanweyne. Dhaqanka Dhullbahante waa mid ka salaysan halgankii gumeysi-diid ee Dareema Caddo iyo Taleex ka gilgishey, ee aragtida ka dhiibta arrimaha Soomaaliya ee saamaynta tooska ah ku leh siyaasadda, iyagoo halgankii xornimo doonka gacan wayn kagaystay. Dhulbahante oo loogu yeedho daraawiish sababtuna ay tahay waxay ahaayee dadkii aas aasay oo hir galiyey dawladii islaamiga ahyd oo kadhisnayd gobolada SSC taasoo ay soomalida ugu yeeraan daraawiishta .
6 Xogta Ttixraacaha
7 Dabaacaha gabay
8 Maqaalaha aqoonyaasha
Jilibada reer darawiish ee guud waa Faarax Garad, Maxamud garad iyo Bah Nugal.
Jilibada reer darawiish ee ugu weyn waa Ugaadhyahan. Jibalada reer darawiish labaad ee ugu weyn waa Axmed garaad. Jilibada reer darawiish ee saddexaad ee ugu weyn waa Jama Siyad iyo Qayaad. Jilibada reer darawiiish ee afaraad ee ugu weyn waa Reer Hagar iyo Hayaag. Jilibada reer darawiish ee shanaad ee ugu weyn waa Baharsame.
garaadka guud ee reer darawiish garaad jaamac garaad cali
Shuruudaha garaadka guud ee reer darawiish
https://www.islamicfinder.org/quran/surah-al-baqara/?translation=somali-mahmud-muhammad-abduh (surah baqarah - somali translate)
https://www.islamicfinder.org/quran/surah-al-humaza/1/?translation=somali-mahmud-muhammad-abduh (surah humaza - somali translate)
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/5/1926/files/2016/02/Dictionary-Biology-1s0uug7.pdf (qaamuus - dictionary)
https://org.uib.no/smi/sa/10/10Defeat.pdf (gudban - ingiriis)
https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhulbahante&diff=203484&oldid=203317 (Qusuusi), (Reer Daraawiish)
Dhulbahante (Reer Darawiish)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhulbahante&oldid=205082"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Agoosto 2020, marka ee eheed 12:52.